हरिवंश आचार्य सानो छँदा – BRTNepal
राजेश कोइराला २०७४ पुष २ गते २०:२३ मा प्रकाशित
हरिवंश आचार्य चर्चित कलाकार हुनुहुन्छ । उहाँ २०३१ सालदेखि हास्यव्यङ्ग्य कलाकार, गायक, नायक आदिका रूपमा देखिनुभएको छ । आचार्यको जन्म २०१४ साल कात्तिक २७ गते काठमाडौंको गैरीधारामा भएको हो । पाँच दिदी जन्मेपछि घरमा ‘हरिवंश पुराण’ लगाएर जन्मिएका आचार्यको नाम त्यही पुराणकै नामबाट लिएको हो । तर उहाँको न्वारानको नाम ‘छत्रनाथ’ हो । सुरुमा रंगमञ्चमा मात्र देखिएका आचार्य २०३८ सालपछि ‘मह’ जोडीका रूपमा मदनकृष्ण श्रेष्ठसँग रंगमञ्च, टेलिभिजन, ठूलो र सानो पर्दाका चलचित्रमा उदाउनुभयो । ‘पन्ध्रगते’, ‘दसैँ’, ‘वनपाले’, ‘कान्तिपुर’, ‘लक्ष्मी’, ‘सुर-बेसुर’ जस्ता २५ टेलिचलचित्रमा एवं ‘यमलोक’, ‘विज्ञापन’, ‘दुई सय पाँच’, ‘बोसे आन्द्रेई भुँडी’ लगायत ३२ नाटकको लेखन, निर्देशन र अभियन गर्नुभएको छ । ‘बलिदान’, ‘के घर के डेरा’, ‘लोभी पापी’, ‘सिन्दूर’, ‘फिलिम’ आदि १५ चलचित्रमा उहाँले अभिनय गर्नुभएको छ । उहाँका दुई छोरा : त्रिलोक र मोहित छन् । यसपटक आचार्य सानो छँदाका केही सम्झना:
बिहान भात खानुअघि चण्डीको किताब पूरै पढ्नुपर्थ्यो । किताब मोटो थियो । फुच्चे केटाका निम्ति त्यो कठिन थियो । मैले एक एक गर्दै बीचका पाना च्यात्दै गएँ । किताब निकै पातलो भयो । पछि त आमाले थाहा पाउनुभयो । २/३ थप्पड लगाउनुभयो । संस्कृत पढ्दा माधव भन्ने साथी थिए । एउटा घटना छ । माधवको संगतले गर्दा म चकचक गर्न जान्ने भएको थियो । त्यसबेला पाँच पैसा भर्खर निस्केको थियो । खबटा घोटेर त्यही पाँच पैसाको आकारको बनाउँथ्यो । चुरोटको बट्टाभित्रको टल्कने कागजमुनि सक्कली पैसा राखेर रगट्दा पैसाको छाप बस्थ्यो । त्यो छापपट्टि राखेर खबटा बेर्थ्यो । हेर्दा ठ्याक्कै पाँच पैसा बन्थ्यो । पसलमा गयो । त्यो नक्कली पैसा हातमा नदिएर कन्तुरमा फ्याँकिदिंदै भन्यो, ‘ए साहुनी पाँच पैसाको पुष्टकारी दिनु त ।’ साहुनीलाई यसरी ठगेर धेरै कुरा किन्ने गर्थ्यो । त्यस्तै बाटामा हिँड्दा नचिनेको मानिसलाई पनि ‘के छ ? ठीक छ ?’ भन्थ्यो । ती मान्छेले, ‘बाबुलाई त मैले चिनिनँ’ भन्थे । माधव, ‘पछि चिन्नुहुन्छ’, भनेर गफ गर्थ्यो ।
आमाको निधनपछि म बढी स्वतन्त्र भएँ । मेरो अंग्रेजी पढ्ने इच्छा पूरा हुने भो जस्तो लाग्यो । म पद्मोदय स्कुलमा कक्षा ५ मा पढ्न थालें । आफैं गएर भर्ना भएँ । वर्षभरिको ‘फी’ पनि पसलमा बाँकी राखेजस्तो राख्न मिल्थ्यो । उधारोमा पढें । पास भएँ । स्कुल नै छाडें । शान्ति विद्यागृह गएँ । सरहरूले के-के सोधेर कक्षा ६ मा पढ्न मिल्छ भन्नुभयो । त्यहाँ पनि ‘फी’ नतिरी उधारोमा पढें । कक्षा ६ मा पास भएँ । पद्मोदयका साथीहरूको सम्झना आयो । कक्षा ७ देखि पद्मोदयमा नै पढें । २०३२ सालमा पद्मोदयबाट एसएलसी दिएँ । २०३५ मा थर्ड डिभिजनमा पास भएँ । पद्मोदयमा पढ्दा नवराज पौडेल, जनार्दन, जयसिंह शाह, प्रदीप जोशी, सुशील अधिकारी, राजेन्द्र अधिकारी मेरा साथी थिए । पढ्ने र नपढ्नेको ‘ग्रुप’ थियो । म, जनार्दन, जयसिंह, प्रदीपचाहिँ नपढ्ने अनि सुशील र राजेन्द्रचाहिँ पढ्ने थिए ।
मचाहिँ दुवैतिर मिल्थें । पद्मोदय पढ्दा चकचके भएँ । स्कुलबाट भाग्थें । कक्षामा जान्नथें । एकदिन हेडसर ईश्वरराज अर्यालले २/३ थप्पड हानेर थुनिदिनुभयो । मलाई थुनेको कोठामा थोत्रा डेस्क, बेन्च, कुर्सी थिए । स्टोरजस्तो थियो । त्यो दोस्रो तलामा थियो । मचाहिँ पाइप समात्दै तल उत्रेर भागें । फिल्ममा त्यसरी भागेको देखेको थिएँ । त्यसपछि मैले पनि सरलाई पिट्छु भन्ने सोचें । म त्यसबेला १४/१५ वर्षको थिएँ । उहाँ पनि गैरीधारा बस्नुहुन्थ्यो । उहाँको सधैंको रुटिन मलाई थाहा थियो । उहाँ घरबाट होन्डा मोटरसाइकलमा निस्कनुहुन्थ्यो । नजिकैको गणेशस्थानमा लगेर रोक्नुहुन्थ्यो । देवतालाई ढोगेर स्कुलतिर जानुहुन्थ्यो । म भने भोलिपल्ट नै सर त्यहाँ आउने बेलामा गणेशको मूर्तिपछाडि लुकें । ढोग्ने बेलामा आक्रमण गर्छु भन्ने सोचें । मुटु त खुब काम्यो । बाहिर निस्केला झैं गर्योक । बालुवामा खुट्टा उचालेको मात्र के थियो, खोस्याक्क गरेको आवाज आयो । सरले पुलुक्क हेर्नुभयो । ‘के गर्छस् ?’ भन्नुभयो । मैले भनें, ‘सरले मलाई हिजो कुट्नुभयो नि ।’ उहाँले, ‘हिजोमात्र के ? आज पनि कुट्छु,’ भन्दै दुई थप्पड लाएर हिँड्नुभयो ।
आमा बितेपछि अलि अप्ठ्यारोमा पर्दै गएँ । गैरीधारामा सगोलको घर थियो । बेच्नुपर्योो । म त्यसबेला १७/१८ वर्षको थिएँ । एकजनाले मलाई जग्गा/घर दिन्छु भनेर ५९ हजार रुपैयाँ लग्यो । उसले केही दिएन । मुद्दा पर्योु । म र विन्दु दिदी भने त्यही झगडियाका घर नक्सालमा गएर बस्यौं । एघार वर्ष मुद्दा धाएँ । बुवाआमा नभएको ठिटोलाई हेपेको बल्ल मैले थाहा पाएँ ।
अधिकारीले मलाई जागिर दिलाइदिनुभयो । म रत्नराज्य स्कुलमा एकाउन्टेन्ट भएँ । महिनाको १ सय ३५ रुपैयाँ तलब पाउन थालें । यो २०३२ को कुरा हो । विन्दु दिदी टंगाल स्कुलमा पढाउनुहुन्थ्यो । उहाँको तलब १ सय ७५ रुपैयाँ थियो । मचाहिँ घर खर्च भनेर १ सय रुपैयाँ दिदीलाई दिन्थें । ३५ रुपैयाँ आफैं खर्च गर्थें । रत्नराज्यमा एक वर्ष काम गरें । दिउँसो रत्नराज्यमा काम गरेर साँझ भैरवबहादुर थापाको भैरव नृत्य दलमा पुग्थें । मलाई पनि नृत्य गर्ने इच्छा थियो । उक्त दलमा जैनेन्द्र लामा, खेलबहादुर लामा र कृष्णबहादुर लामा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले नाच्न लानुभयो । म सार्हैछ दुब्लो थिएँ । नाच्न सुहाउँदैन भनेर मलाई झाँक्री नृत्यमा बिरामी र पद्मसम्भव नृत्यमा लाभा फुक्ने काम दिइयो । त्यहाँ पैसा पाइँदैनथ्यो । दलमा काम गर्न पाउनु नै ठूलो कुरा थियो ।
नक्सालमा बस्दा फुटबलको मज्जा अर्कै थियो । सानो गौचरणमा एकपटक चावहिल र नक्सालको फुटबल भयो । हामीले हार्यौं । चावहिलका केटाहरूलाई कुटेर खेदायौं । उनीहरूले ख्याल गरिरहेका रहेछन् । केही समयपछि चावहिल र नक्सालबीच भत्क्यापुलमा हामी पौडी खेल्न गयौं । चावहिलका केटाले हामीलाई देखे । पिट्न त पिटेनन् । लुगा सबै खोलामा फालिदिए । हामी नाङ्गै भयौं । साँझ परुन्जेल लुक्यौं । अँध्यारो भएपछि कर्कलोको पातले शरीर ढाकेर साथीका घर पुग्यौं । सुरुवाल मागेर लगायौं र घर गयौं ।
(२०६४ मंसिर १४ मा कान्तिपुर दैनिकको बालकोसेली कोपिलामा प्रकाशित)
राजेश कोइराला का अरू रचना